Macaamiisha adeega janjeedha kordhiyo qiimaha alaabta!
Adeegga waa xididka horumarinta Sine ee. Our fikradda iibka waa wada taagan la macaamiisheena loo eegin xaaladda. Waxaan xukumi doonaa qaab ciyaareedkeena oo ku saabsan sida si fiican u aan ka dhergin baahida macaamiisheena 'oo lagu hanuuniyey by aaminsan in macaamiisheena dambeyntii go'aamin doona sida guul waxaan noqon doonaa.
Sales The warrami macaamiisha ah 24 saacadood ka dib dhalmada gudahood;
Sales ayaa hayn doona baaritaanka qanacsanaanta macaamiisha xilliyo, falanqeeyo oo koobaya shuruudaha macaamiisha iyo suuqa dalabaadka iman kara;
Sales The marka hore ka dhigi doonaa warcelin Waaxda Tayada leh qaab qoraal ah mar qaata cabashooyinka macaamiisha ku saabsan alaabta. Markaas Waaxda Tayada ka dhigi doonaa falanqaynta, qaadaan tallaabo lagu saxayo, raad raaco iyo aqoonsiga saamayn fulinta iyo ugu dambeyntii wargeliyaan natiijooyinka si Sales ah. Sales ku soo diri doono, kuwaas oo waraaqaha iyo falanqaynta la xiriira macaamiisha si aad u hesho xaqiijin qanacsanaanta ay;
Waxaan ku siin karnaa gaadiidka kala duwan: By Air, By Sea, TNT / oogeen / UPS / iyaduna Express iwm
design Engineering iyo xal farsamo:
Waxaan leenahay awood xoog leh in xal farsamo gaar ahaan Engineering iyo Design. Waxaa naga go'an in la dhigaayo iyo horumarinta adeegyada iyo horumar joogto ah. shaqaalaha Our injineernimada leedahay sano ka badan oo waayo-aragnimo ku sameeyo birlabta, imtixaanka, hubinta tayada.